Fumana i-Devolo 1200+, eyona PLC intle kwintengiso kule raffle | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Imincintiswano, ngokubanzi
Iingxaki zonxibelelwano zihlala zikhona. Kunzima kuthi ukufumana uluhlu olufanelekileyo kuwo onke amakhaya okanye kwindawo yokusebenza. Kungenxa yoko le nto uDevolo esebenzela ukuphucula intsebenzo yonxibelelwano kangangeminyaka. Ngokwethu Sivavanye ezi mveliso ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuphucula inethiwekhi njengoko ubona kuphononongo lwethu. Siyavuya ukukuxelela oko unokufumana enye yezi mveliso zimnandi simahla. Ngena kwaye ufumanise njani.
1 Amava ethu ngemveliso
2 Ndithatha njani inxaxheba?
Amava ethu ngemveliso
Isixhobo ipapashwa nge- € 139,90 kwiwebhusayithi yayo esemthethweni, le yeyona nto iphambili yokuthenga. Kwelinye icala, sinokuyifumana ngokulandelelana kwiindawo zokuthengisa ezinje ngeMedia Markt okanye iAmazon ngexabiso eliphakame kancinci, kuba eAmazon siyifumana phakathi kwe- € 150 kunye ne- € 120 malunga, Ukuba yimveliso yePremiyamu eyonwabelayo ukuhanjiswa ngeeyure ezingama-24 kwaye isimahla
Masifumane uqhagamshelo lweWiFi akukho lahleko okanye latency ngamandla afanayo awayekhutshwa yirouter ephambili. Esi isenokuba sesona sizathu siphambili sokuba sijongane nemveliso ebiza ngokungathandabuzekiyo, kodwa inikezele ngento eyithembisayo. Isenokungabi lukhetho lokuqala xa uthenga i-PLC, kodwa ngokungathandabuzekiyo iya kuba yeyonyulwe kwiimeko ezinzima okanye ezicingelwayo zonxibelelwano okanye zeofisi.
Ndithatha njani inxaxheba?
Ngaba uyafuna ukuphucula unxibelelwano lwe-WiFi ekhayeni lakho? Eyona PLC ibalaseleyo kwi @iqosweb kwisandla se @ 121PR inokuba yeyakho simahla.
- Sitshele ukuba kutheni kufuneka ibe yeyakho
-NgolwesiHlanu ngo-18: 00 siyakuba nophumeleleyohttps://t.co/MuvczIbkjH pic.twitter.com/AB7u0cP34g
Iindaba zeGadget (@agadget) Novemba 20, 2017
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Fumana i-Devolo 1200+, eyona PLC intle kwintengiso kule raffle